गिरिजाले लौन ठोक्नु पर्यो भनेकै हो : डा. भट्टराई - Samajbad
गिरिजाले लौन ठोक्नु पर्यो भनेकै हो : डा. भट्टराई
काठमाडौं : फागुन २, समाजवादी पार्टी नेपालका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले जुनयुद्ध दिवसका अवसरमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति आंशिक सत्य भएको बताएका छन् । शुक्रबार संसद भवन बाहिर पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भट्टराईले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६२ माघमा घोषणा गरेको नगरपालिका निर्वाचन बिथोल्न स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीलाई आग्रह गरेको बताएका हुन् । १२ बुँदे समझदारीमा नै कांग्रेस लगायतका सात दलले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने र तत्कालिन माओवादी फौजी ढंगले अघि बढ्ने सहमति भएको उनले बताए ।
उनले भने ‘उहाँ (प्रचण्ड) को बानी नै सानो कुरालाई पनि बढाई चढाई गरी प्रस्तुत गर्ने बानी छ । उत्तेजना फैलाउने स्वभाव छ । १२ बुँदे समझदारीको ड्राफ्ट गर्ने म नै हुँ । मलाई याद छ । उहाँहरुले शान्तिपूर्ण ढंगले र हामीले फौजी ढंगले प्रहार गर्ने सहमति भएको थियो । पुसको अन्तिमतिर आन्दोलन राम्रोसँग हुन सकेन । हामीले युद्धविराम भंग गरेर जाने निर्णय गर्दा उहाँ (गिरिजा) ले ठोक्नुपर्यो भनेर चाहीँ भन्नुभएको हो । लौ न कारवाही अगाडी बढाउनुपर्यो उहाँले भनेको हो म पनि साँक्षी थिए । नगरपालिका निर्वाचन विथोल्न फौजी कारवाही बढाउनुपर्यो भन्नुभएको हो ।’
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले तत्कालिन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला ज्युँदै हुँदा नभनेको कुरामा केही भन्न नसकिने प्रतिक्रिया दिए । ‘खोई गिरिजा प्रसाद कोइराला जिउँदै हुँदा उहाँ (प्रचण्ड) ले केही बोल्नुभएन् । बितिसकेको व्यक्तिको बारेमा बोलेर हामी कसरी कमेन्ट गर्ने ?’ उनले भने ।
कांग्रेसका राष्ट्रियसभा सांसद उपाध्यायको निधन
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रकरण : बास्कोटासँगै प्रधानमन्त्री ओलीको पनि संलग्नता रहेको थापाको आरोप
७० करोड कमिसनको अडियो बाहिरिएपछि मन्त्री बास्कोटाद्वारा राजीनामा
सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई बर्खास्त गर्न कांग्रेसको माग
नयाँ पत्रिकाले बास्कोटाको ७० करोडको समाचार नछापेपछि पत्रकारले दिए राजिनामा